PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - Inkosi ikhala ngozalo oluyiqhwaga umbuso
Inkosi ikhala ngozalo oluyiqhwaga umbuso
Ithi badlala ngayo ngoba ingafundile
Ilanga - 2017-09-07 - Izindaba - PHUMLANI GAMA
IKHIHLA isililo ngokumbelwa iliba itshalwe isadla anhlamvana wuzalo lwayo inkosi yesizwe saKwaMashabane, kwaGumede, eManaba KwaMhlabuyalingana, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal. INkosi Sizabantu Josiah Gumede (92), isola ingxenye yamalunga omndeni wayo ngokwakha itulo lokuyiketula embusweni kubekwe inkosana yayo, uMnu Sipho Gumede.
Inkosi ivule icala lokuqhwagwa umbuso wayo isaphila. Lolu daba selukwabomthetho njengoba ngoMsombuluko luhlehlile eNkantolo yeMantshi yasoBonjeni, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngenxa yokungabikhona komshushisi osezingeni lokuqula amacala alolu hlobo.
Izingwevu zesizwe beziphume ngobuningi bazo ziyokweseka inkosi. ILANGA libenengxoxo ekhethekile neNkosi Gumede - ngesikhathi sekuphunywa enkantolo - yaveza ukuthi izibona ingasaphephile kubafowabo abayisi-6 ebagagule ngamagama.
Inkosi isigadwa ngabaqaphi abasezingeni eliphezulu namaphoyisa asehlala enkanise esigodlweni sayo. Ilandisa ngokusuka nokuhlala kodaba, ithi izinkinga ziqale ngowezi-2014 ngesikhathi kuqala isomiso. Ithi esizweni sayo bekufika abantu bakwezinye izindawo beyocela ukubeka izinkomo zabo emuva kwalokho bashiye eyodwa esigodini.
Kuthe ngowezi-2015 kwafika uzalo lwayo esigodlweni lwayobeka isithombe esingesihle ngezinduna zenkosi luthi zidla izinkomo zakomkhulu ngokungenanembeza futhi ziphila impilo ephambili ukwedlula yona inkosi.
“Njengoba bengabakwethu, ngisithathile iseluleko sabo. Bathe besuka bahamba kuzona zonke izigodi baqoqa lezi zinkomo kodwa kuze kube yimanje kazikafiki esigodlweni,” kulandisa inkosi.
Ithi kuhambe isikhathi kuthulekile okuthe ngokuqala konyaka, uzalo lwayo lwaba nemihlangano esigodlweni sayo kodwa yona ibingeyona ingxenye yayo.
“Kuthe zingama-30 kuNhlangu- lana (June) kwafika amadoda nje emzini kababa ehamba nabafowethu. Bathe bazobuza ukuthi ngisaqhubeka yini nokuthi uma ngidlula emhlabeni nguSipho ozothatha ubukhosi. Impendulo kube wuyebo.
“Kuthiwe uma ngikuvuma lokho mangisayine phansi, nebala-ke ngenze njalo. Umfana wami uSipho ubengekho yena. Leli cala ngilivuliswe wukuthi basebenzise ithuba lokuthi mina kangifundanga njengoba bengitshele ngomlomo maqede ngasayina.
“Okulandele lapho emkhandlwini wami kufike uNkz u....(isisebenzi soMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZuluNatal emahhovisi aseMkhuze) ezomemezela ukuthi ubukhosi buyasuswa kimina kusukela manje, sekuzophatha indodana yami uSipho ngoba mina sengiyehluleka wukusebenza.
“Ngimbuze ukuthi kwenziwa ngubani lokho, lutho impendulo. Okungiphatha kabi kakhulu wukuthi bangixabanisa nendodana yami. Abantu bavele bahhomuzela enkantolo yami befuna ukumudla luhlaza lo ntombazane. Ngikhuzile, ngokuhamba kwezinsuku izinduna zangibikela ukuthi udaba luyashuba ezigodini zonke abantu bafuna ukwazi ukuthi ngubani ongabeka enye inkosi ngikhona mina.
“Ngizithole ngifanelwe wukungena emotweni ngihambele zonke izigodi zesizwe sikababa ngiyokhuza abantu ngoba bazongena esilingweni sokuchitha igazi laseNdlunkulu, okuyinto engafanele ukwenzeka,” kusho inkosi.
Ithi udaba ilubike kusihlalo wabaholi bendabuko eMkhanyakude, iNkosi Mabhudu Tembe, efike yathi lungaphezu kwamandla ayo, icela lwedlulisele endlunkulu KaZulu, KwaNongoma.
“Ngokubambisana nabanye abakwethu, ngiqhube izinkomo ezimbili ngalibangisa KwaNongoma. Kuthiwe kayizange yenziwe into efana nalena, laba baqhwaga ubukhosi bami. Kumanje ngifake incwadi yesivimbezelo sokuba bangalinge balubhade lapha esigodlweni ngoba abanye babo baxova izinto nje, yingoba kabahlali lapha.
“Ngiyavuma, yimina osayinile kodwa basebenzise ukuthi kangifundanga, bangitshela okunye kanti ngenziswa okunye. Benjalo nje, bafuna ngihlukane nezinduna zami. Ngingakwenza kanjani lokho ngoba yizona ezibheke isizwe sami? Laba abagila le mihlola bayizakhamizi zakwamanye amakhosi,” kusho inkosi.
“Kunencwadi abangibhalele yona bathi bayangehlisa esikhundleni, bathi ngiyagula futhi sengikhathele kanti wubukhansela yini lobu? Ngigula ngihlolwe ngubani? Mina ngiyaphila futhi ngisazohlala esikhundleni sami, kakukho bunzima lapha esikhundleni,” kusho inkosi.
ILANGA lixhumane noMnu Julias Gumede owuzalo lwasendlunkulu, ongomunye wabasolwa ngokuketula inkosi. Uthe kakulona iqiniso ukuthi bakhe itulo lokugudluza inkosi esihlalweni kodwa kube yiyona enqume ukudlulisela izintambo zombuso endodaneni yayo.
“Inkosi isibizile siwumndeni yathi izosazisa ukuthi isikhathele, isifuna ukuphumula manje. Sikushayele ihlombe lokho saqala amalungiselelo okugcoba nokufungisa inkosana yayo uSipho.
“Konke sesikwenzile kuphelele. Maqondana nomholo wenkosi sinqume ukuthi sizowuhlukanisa phakathi. Sizokwenza i- stop order sayo le mali ukuze ingene ngapha nangapha,” kusho uMnu Gumede.
“Ngawo uMsombuluko abantwana basendlunkulu banikele esiteshini somphakathi beholwa nguMfu Zwelithini “Kruger” Gumede lapho befike basho ukuthi kakulona iqiniso ukuthi baketula umfowabo kodwa badinwa wukuthi inkosi ihamba nezinduna ezinye zazo ezingelona uzalo lwasendlunkulu.
Uthe inkosi yiyona ezikhulumele ukuthi isithatha umhlalaphansi. “Thina siwuzalo lwasendlunkulu, yithi abanikazi besigodlo, ubaba uzibhalele yena incwadi egunyaza ukuba kuphakanyiswe indodana yakhe. Okunye esikubonayo wukuthi ingqondo kababa icabanga ibuye ikhathale futhi ungumuntu obuthakathaka.
“Konke sekuphethiwe kasisakwazi ukubuyela emuva. Okusiphatha kabi wukuthi laba abazibiza ngozalo lwasendlunkulu bahamba benza imihlangano ngasese bephaka impi. Maqondana nezinduna, sidinwa wukuba zingezi kithina, kunalokho zigijima nenkosi kuyiwa KwaNongoma.
“Siyezwa nje kuthiwa bakha itulo bathi kuzochitheka igazi, thina kasixabene namuntu kodwa silungisa okwakithi. Kuningi esingathandi ukukuveza ngoba sesaba ukuthi kunamahlazo phakathi. Ngaphandle kokuthi silungisa okwakithi sivikela ubukhosi bakwethu ngoba siyabona ukuthi bulengela eweni,” kusho uMnu Gumede. Isizwe sakwaGumede sinezigodi ezili-16.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, KwaZulu-Natal, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe ngokuthola kwabo inkosi yiyona ebize umndeni ukuyowuchazela ngezinqumo zayo zokubeka phansi izintambo zokuhola isizwe.
“Umnyango wethu kawungeni kakhulu ezindabeni zobukhosi kodwa kuyaye kube wukuthi umndeni wasebukhosini uyahlangana uphuma naziphi izinqumo ngofanele ukuhola isizwe.
“Ngokuthola kwethu, yiyona iNkosi Gumede ebize umndeni iyowuchazela ukuthi isikhathele ngakho isinxusa ukuba kudluliselwe endodaneni izintambo zokuhola isizwe. Thina njengomnyango silandele umndeni wasendlunkulu sisebenzisa ihhovisi lethu eliseMkhuze, eMkhanyakude.
“Kumanje indodana yenkosi egunyazwe ukuba ihole isizwe ngoba konke lokho kubhalwe phansi futhi inkosi yasayina phansi inxusa ukuba kubekwe indodana yayo,” kusho uMnu Mayisela.